Maxaad Ka Ogtahay Burjiga Iyo Haybada Aad leedahay? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdijabaar Sh. Axmed — March 4, 2017
Aadanaha Illaahay (s.w.c) uumay qaarba wax buu ku manaystay. Mana jiro, walina lama sheegin kuwa wada dhammaystiran. Laakiinse waxaa jiro haybado Illaahay swc bixiyo wuxuuna Illaahay siiyaa oo kali kuwa uu asiga ugu tala galay oo kali.
Burjigu waa hibo Eebbe bixiyo. Qofka leh burjiga, waa la jecelyahay, hadalkiisana waa la maqlaa. Hoggaamiyaasha burjiga leh, qaarkood awooddaas si fiican bay u isticmaalaan, qaarna si xun. Kuwa sidda fiican u isticmaala waxaa ka mid ah hoggaamiyayaasha dalka, dadka iyo diinta intaba u damqada. Kuwa sidda xun u isticmaala waxaa ka mid ah kuwa kaligood taliska ah.
“Waxaa jiro caadooyin xun-xun oo ay dadka ka dhigtaan caadi iska caadi ah mise kuwa ay u arkaan inay la wanaag santahay. Sidda abaanduliyeyaasha dagaalka Beelaha oo ah dagaal yahaan kusoo barbaaray dhaqanka qabiilka ee ku aadan dagaalka ayaa waxay noqdaan kuwo geesinimadooda awgeed saameeyn weyn si dadban ugu yeesha adeegsiga dhaqanka xun ee ku aadan colaadaha beelaha wada dega u dhexeeya”
Nin Ingriis ah oo aad u daneeyey islaweynida Soomaalida ay u hayso dadnimadooda iyo mowqifkooda aan lahayn shakiga ee ku aadan in gobanimadooda ay ka difaacdaan shisheeyaha, ayaa safar ku yimid Soomaaliya 1942, isaga oo lugta ku marayey gobolada waqooyi dhinacooda koofureed. Ninkaas wuxuu heystey sawir ah in dadkii jebiyey wadanka Ingiriiska oo adduunka horey ugu awooda roonaan jirey, iney leeyihiin qiimo aad u sareeya oo ay u hayaan dhowrista heybada iyo sharafka dadnimadooda. Maxaayeelay dadka Ingriiska waxay markasta ku ahayd arrin aan la qaadan karin markii gumeysiga Ingriisku uu la galay dagaalka dagaalyahankii gobonimada Soomaaliyeed ee Sayid Mohamed Cabdulle Xasan in ciidankii Soomaaliyeed ay kumanyaal dagaalka ugu dhimanyeen iyaga oo ka soo jeeda dal dadkiisu tiro yar yahay, haddana aadan moodin in dad ka dhinteen qiimaha ay u qabaan sharafka madaxbanaanidooda awgeed.
“Nasiibdarro markii ninkaas uu hoos u dhexgalay bulshada dadka Soomaaliyeed ee degaan kaas wuxuu kala kulmay wax qiimo ahaan uu aadamigu ka argagaxo. Wuxuu arkay in dadka Soomaaliyeed aysan ehelnimo wadaninimo aysan wadaagin oo waxa ay degaanka ka aaminsan yihiin uu yahay gooni u daaq”
Waxaa yaab weyn ku noqotay marka beelaha wada dega ay colaad dhexmarto sida aan raacsaneyn qiimaha dadnimada oo ay iskula dhaqmaan gudahooda, haddana dhaqankaas xun ay ku faanayaan oo ay weliba iskula weyn yihiin. Wuxuu tusaalle u soo qaatay in dagaalyahanka beelaha oo intooda badan ah rag, ay ku dhiiran yihiin in naag uur leh oo ah hooyo mudan gargaar aadaminimo iyo in lagala xishoodo dhib la dareensiiyo, iney dooxaan uurkeeda, haddana ay gowracaan caruur aan dhalan oo isla mar ahaantaasna ay ku faanaan iney dileen cunug wiila.
Soomaalidu Illaahay wuxuu siiyay karaamo iyo garaad wax lagu garto. Nimcada ugu weyn Illaahay swc na siiyay waa Diinta Islaamka, mana jirto walina uunka laguma sheegin nimco ka weyn nimcada aan ka ahayn diinta Islaamka. Hadana waxaa wanaagsan inaan si dhaqan wanaagsan leh ugu dhaqano diinteenna. Islaamka waa diin nasteexo ah, qofkii haystana loogu baahanyahay inuu la yimaado dhaqan wanaagsan oo waafuqsan diinteena si dadnimadeena ay u noqoto mid ku dabadayasho mudan.
Tags: Maxaad Ka Ogtahay Awoodda Burjiga Iyo Haybada Aad leedahay?
Next post Buufiskii Xumaa Iyo Tiiraanyo Tahriib -Qeybtii 7aad
Previous post Buufiskii Xumaa Iyo Tiiraanyo Tahriib Qeybtii 6aad